Ukuze Uwenze kwi-Journalism, Abafundi kufuneka babe neNdaba yeNdaba
Ngokuqhelekileyo, luphuhliso oluphazamisayo xa uqala ukuva amazwi ngaphakathi kwentloko yakho. Kwiintatheli, ukukwazi ukuva nje kuphela kodwa ukuphulaphula amazwi anjalo kufuneka.
Ndithetha ntoni na? Abathathi bamashishini kufuneka bahlakulele oko kubizwa ngokuthi "iindlebe zeendaba" okanye "impumlo kwiindaba," ukuvakalelwa ngokwemvelo yinto ebalulekileyo ibali . Kumphathiswa onolwazi, ulwazi lwamazwi luvame ukubonakalisa njengezwi elikhalayo entloko yakhe naliphi na ibali elikhulu liphuka .
Oku kubalulekile, " ilizwi likhwaza. "Udinga ukuhamba ngokukhawuleza."
Ndiza kule nto kuba ukuphucula ukuvakalelwa yinto ebalulekileyo ibali yinto eninzi yabantwana bam iindaba zokulwa nazo. Ndiyazi njani oku? Ngenxa yokuba ndihlala ndizinika abafundi bam iziqu zokubhala kwimiba yokubhala kwimeko apho ikhona isakhiwo, ingcwatyelwe kwindawo ethile ngasezantsi, eyenza enye ibali lephepha-enye into ehamba ngayo.
Omnye umzekelo: Ngomsebenzi ngokuphathelele ukushayisana kwemoto emibini, kuthethwa ngokugqithiseleyo ukuba unyana weeorhulumente wendawo wabulawa ekuhlaseleni. Kuba ngubani ochitha iminyaka engaphezu kwemihlanu kwiindaba zoshishino, olo phuhliso luza kuseka ii-alarm bell.
Nangona kunjalo abaninzi bam bafundi babonakala bekhuseleka kule ngqungquthela. Benza ngokubhaliweyo bhala ucezu kunye nokufa kwendodana yodolophu engcwatyelwe phantsi kwebali labo, ngokuqinisekileyo apho bekukulo msebenzi wokuqala. Xa ndibonisa ngokuthe xaxa ukuba baye bahlushwa - ixesha elikhulu-kwibali, bavame ukubonakala bengqina.
Ndinayo ingcamango malunga nokuba kutheni abaninzi abafundi be-school-j namhlanje bengenayo ingqiqo yeendaba. Ndiyakholwa kukuba kuba bambalwa abalandela iindaba ukuqala . Kwakhona, oku kuyinto endiyifunayo kumava. Ekuqaleni kwayo yonke i-semester Ndicela abafundi bam ukuba bangaphi babo bafunda iphephandaba okanye iwebhusayithi yeendaba nsuku zonke.
Ngokuqhelekileyo, kuphela isithathu sezandla kunokunyuka , ukuba oko. (Umbuzo wam olandelayo: Kutheni uhlala kwiklasi yezobhengezo ukuba awunomdla kwiindaba?)
Ngenxa yokuba abafundi abambalwa befunda iindaba , ndiyicinga ukuba akumangalisi ukuba bambalwa banempumlo kwiindaba. Kodwa ingqiqo enjalo ibaluleke gqitha kunoma ubani othemba ukwakha umsebenzi kule shishini.
Ngoku, unokubamba izinto ezibangela ukuba iindaba eziphathekayo zibe ngabafundi-impembelelo, ukulahlekelwa ubomi, iziphumo kunye njalo njalo. Yonke i-semester ndibafundi bam ukufunda isahluko esifanelekileyo kwiincwadi zezifundo ze- Melvin Mencher , uze ucele imibuzo kuyo.
Kodwa ngezinye iinkqubela ukuphuhliswa kwengxelo yeendaba kufuneka kudlule ngaphaya komfundi wokufunda kunye nokuxhamla kumzimba womphephandaba nomphefumlo. Kumele ibe yintshukumo, inxalenye yombhali weendaba.
Kodwa oko akuyi kwenzeka xa umfundi engakuvuyo ngeendaba, kuba ingqondo yeendaba iyona nto ngokuphathelele ukunyuka kwe-adrenaline ukuba nabani na owake wambona ibali elikhulu uyazi kakuhle. Yiloo nto ifanele ibe nayo ukuba abe ngumdlali-ntatheli omhle, uncinci omkhulu.
Kwimemori ethi "Ukukhula," owayengumlobi weNew York Times owayengumNumzana Russell Baker uyakhumbula ixesha lakhe kunye noS Scotty Reston, omnye ummeli weNkcazo weNkcazo, bebeshiya i-newsroom ukuze baphume emini.
Emva kokuphuma kwesi sakhiwo bava ukulila kwe-street traffic. U-Reston ngelo xesha wayesele eqhuba iminyaka, kodwa ekuveni kokuvakala kwengxolo, uBhenge uyakhumbula, njengombhali wenkunzi ebusheni bakhe, ugijimela kwindawo yokubona ukuba kwenzekani.
Ngakolunye uhlangothi, uBhabhele waqonda ukuba isandi asizange sichukumise nantoni kuye. Ngaloo mzuzu wayeqonda ukuba iintsuku zakhe njengentatheli -ndaba yeendaba .
Awuyi kuyenza njengentatheli ukuba awuyi kuba nempumlo kwiindaba, ukuba awuyiva loo lizwi likhala ngaphakathi kwentloko yakho. Kwaye akuyi kwenzeka ukuba awuvuyi ngomsebenzi ngokwawo.
Yandisa i-Decimal by 10, 100, 1000, okanye 10,000
Iimpawu zeentlanzi zaseJapan
Ukukhusela iHanger yengubo
Ngaba I-Stroke Yokuphahlazeka Ngengozi Ibhola LeGalofu Eliya Kule Tee?
Amagama aseLatin kwiintsuku zeveki
Izibonda zikaGrigor Dimitrov kwiifoto
UDavid Childs Architecture - I-World Trade Center & Beyond
Inkcazo yoLawulo lweeKlasini
IsiCwangciso seMatriki sokuQala ukuPhathwa kweziThutho